imithi yesimanje, ezihlukahlukene izimpethu eyaziwa ezingalimaza umzimba womuntu, futhi iyingozi kokubili ingane futhi umzimba omdala. Zikhona nezinye izimo njalo lapho izikelemu atholakala izingane. Ascariasis - isifo kunalokho esiyingozi okudinga ukuphathwa ngendlela ekhethekile.
Ascaris ezinganeni: imizila ukuchayeka kanye izigaba ekuthuthukiseni amagciwane
Ascaris - a izikelemu kunalokho enkulu, nayo isidumbu sayo obuphelele yisilinganiso sesifundo 40 amasentimitha. Ngokungafani nezinye izilokazane, Ascaris ayinakho amaswidi noma izingwegwe axube umzimba aphethe. Kodwa uhlelo kwemisipha iyakhiwa ngamagama ashubile - amagciwane njalo lihambe amathumbu sengqondo maqondana nokudla.
I izikelemu zesifazane angakhiqiza amakhulu amaqanda ngosuku. Bathandana nalo babuye bathandane kanye indle out. Njengomthetho, avame itheleleke ezingenazo ukudlala esihlabathini noma umhlaba, abazigezi izandla ngaphambi kokudla. Ngaphezu kwalokho, amaqanda Ungangenela umzimba futhi kabi sihlanzwe izithelo noma imifino. Kwezinye izimo, abathwali kungenzeka amaphela, izimpukane nezinye izinambuzane.
Emathunjini, amaqanda zibe izibungu, okuyinto ke ukungena nolwelwesi lwamafinyila futhi ngegazi ezihambayo ngomzimba - ngakho lapho Ascaris emaphashini. Khona-ke, awela emlonyeni, lapho ingane iphuza futhi. Uma emathunjini, izibungu zibe abantu abadala.
Ascaris ezinganeni: izimpawu
Izimpawu zokuqala avele namanje esigabeni yentuthuko elalikudle lapho liseyisibungu e umgudu wokuphefumula - ingane ingase esekhala ubuhlungu esifubeni, kwezinye izimo, kukhona isifuba esomile kanye ukuqubuka esikhumbeni, okuyinto kuzodlula ngokushesha.
Imisebenzi Ebalulekile ascarids e emathunjini amancane, njengoba umthetho, cishe imperceptible. Ingane kungaba ingxenye ulahlekelwe esesuthi, noma okuphambene nalokho. uqale ukuwadla kakhulu. Ngezinye izikhathi izingane ezikhala ngezinhlungu ubuhlungu besisu engaqinile, kodwa futhi ikhanda. Ngezikhathi ezithile kukhona isifo sohudo. Kwezinye izimo, izimpawu kungaba kakhulu - ukucobeka, ukungakuthandi ukudla, uhudo olubi.
Ascaris ezinganeni: ukuxilongwa kanye nokwelashwa
Ukuze sithole khona izimpethu emzimbeni, kubalulekile ukuba afeze ukuhlaziya endleni, ezovela kanye amaqanda lezi ezidala. Ngaphezu kwalokho, iziguli ezingane anda amazinga eosinophils, kanye erythrocyte sedimentation izinga - lokhu uzokutshela imininingwane ukuhlolwa igazi.
Ngokuqondene ukwelashwa, amalungiselelo akhethekile worming kukhona ukusetshenziswa ngokuyinhloko. Ukuze libeke udokotela kuphela - ayikwazi ukwenza ngokwayo. Uma ascariasis hhayi amenable ekwelashweni olandelanayo, isiguli busuka emathunjini inesikhala ngamapayipi lapho umzimba uthola umoya-mpilo. Njengoba izikelemu kakhulu sensitive ukuthi le gesi futhi ziphile ezimweni anaerobic, basuke abulawa okusezingeni eliphezulu umoya-mpilo okuhlushwa.
yezinkinga Ascariasis futhi kungenzeka
Nge ukuthola ngesikhathi esifanele kanye nokwelashwa yalesi sifo sihamba ngaphandle kwemiphumela. Kodwa kwezinye izimo ezimbi kakhulu, mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi emathunjini kungaba buthelela omningi ezidala ukuthi kungaholela ukuhlanza, futhi ngezinye izikhathi ukuthuthukiswa peritonitis. Ngaphezu kwalokho, uma izimuncagazi ukuvimba Amapayipi Bile, ingane ingase ukuthuthukisa i-jaundice. Lapho injected isithasiselo, izimpethu kungabangela ukuvuvukala yayo.
Izikelemu kuyingozi kakhulu kubantu besifazane abakhulelwe, njengoba ngegazi isibungu angangena fetus khona ukuqedela ukuthuthukiswa. Lokhu kwakha ingozi isisu, ukubeletha singakafiki isikhathi, esongela ukunqabela e ongakazalwa ingane ezifweni.
Yingakho kubalulekile ukugcina izinyathelo ezinhle inhlanzeko. Okungukuthi, njalo ugeza izandla ngaphambi kokudla, ngokucophelela ukuphatha ukudla, ukuchitha indlu izinambuzane, ikakhulukazi izimpukane namaphela.